Mangarahara amin'ny fanatanterahana - Fielezana salanisa mahomby | FXCC
Home / Trading / Mangarahara amin'ny fanatanterahana / Fielezana salanisa mahomby
Fielezana salanisa mahomby amin'ny famonoana ho faty
Ny mangarahara dia vato fehizoro amin'ny serivisy atolotray, izay misokatra amin'ny zavatra rehetra ataontsika.
Tena manolo-tena amin'ny fahombiazanao izahay ary manome fitaovana marobe izay tsy ataon'ireo mpampifaninana mpifaninana aminay.
Ny fitaovam-pielezan'ny salanisa azonay dia manambara ny salan'isan'ny mpanjifanay marina tamin'ireo fizarana farany teo. Azonao atao ny mampiasa ny menio mitete-midina mba hisafidianana ireo fitaovana tianao hadiovana. Ny axis Y dia mampiseho ny fiparitahana, ny axis X ny fotoana.
Ny sary an-tsipika dia maneho ny fiparitahana misy amin'ny fotoana voafaritra, ary hitanao ny sanda miisa 15 minitra antonony milanja mavesatra. Azonao atao ny mamantatra haingana ny spikes sy ny vanim-potoana mihombo ny fiovan'ny toetr'andro, angamba rehefa nisy tranga vaovao niavaka.
Inona no miparitaka?
Ny fiparitahana dia ny mahasamihafa ny vidin'ny fividianana sy fivarotana (tolo-tanana sy tolotra) fitaovam-bola. Misy karazany roa ny fiparitahana: raikitra sy mitsingevana. Ny fielezana raikitra dia tsy miova arakaraka ny toetr'andro sy ny ora amin'ny tsena anio. Ny fielezana mitsingevana dia hiova arakaraka ireo lafin-javatra roa ireo. Ny fielezana mitsingevana dia voaporofo fa mahomby kokoa satria ny mpivarotra dia mahazo ny vidin'ny tsena tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra eny an-tsena. Ny fiparitahana raikitra dia hanana singa fiantohana ampiana amin'ilay fitanisana satria mety tsy maintsy fefy ny fikatonany ny mpivarotra.Hamaky bebe kokoa
Famakiana ny mombamomba ny tabilao
Azonao atao ny misafidy vanim-potoana fohy na lava kokoa amin'ny fipihana eo amin'ny endri-zoom izay eo amin'ny zoro ankavanan'ny tabilao. Raha misidina ambony spikes ianao dia afaka mahita ny fotoana nampisondrotra ny fiovan'ny tsena nahatonga ny fiitaran'ny vidiny. Ny fiakaran'ny fielezana dia mety noho ny vaovao mamoaka vaovao, navoaka ny angon-drakitra na ny hetsika macroeconomic iray.
Efa manana kaonty? Hiditra